के न्यायको दिन १,००० वर्षको हुन्छ? | बाइबल प्रश्नहरूको जवाफ
लेखको भाषा अकोली अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इबान इलोको इसोको ईवी उङ्गाबेरे उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओसेसियन कक्चिक्वेल (पश्चिमी) कम्बोडियन करेन (गः) काजाक किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चेक चोवे जर्जियन जर्मन जान्डे जापटेक (इस्मस) जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन डच डाँग्मे डेनिश ड्रेहु ताहिटी तोक पिसिन तोतोनक त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) नेपाली नोंगा न्यानेका पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बाटाक (टोबा) बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मझतेक (हुआट्ला) माम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी माल्टिज मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रुन्यानकोर रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुभेल वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे वोलाइटा शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिडामा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हौसा
न्यायको दिन किन खुसीको दिन हो?
बाइबलकालीन समयमा आफ्ना उपासकहरूलाई अन्याय नहोस् भनेर परमेश्वरले न्यायकर्ताहरूलाई चलाउनुभयो। (न्यायकर्त्ता २:१८) भविष्यमा आउने न्यायको दिन खुसीको दिन हुनेछ भनेर बाइबलमा बताइएको छ। किनभने त्यतिबेला पृथ्वीका न्यायकर्ता यहोवा परमेश्वरले मानिसहरूलाई अन्याय र अत्याचारबाट छुटकारा दिनुहुनेछ।—भजन ९६:१२, १३; यशैया २६:९ पढ्नुहोस्।
परमेश्वरले येशूलाई जीवित र मरेकाहरूको न्याय गर्न नियुक्त गर्नुभएको छ। (प्रेषित १०:४२; १७:३१) थुप्रै मानिसले परमेश्वरबारे सिक्न नपाईकनै मृत्यु भोगेका छन्‌। न्यायको दिनमा ती मानिसहरूलाई येशूले फेरि जीवित गर्नुहुनेछ। त्यतिबेला तिनीहरूलाई परमेश्वरबारे सिक्ने र उहाँलाई माया गर्ने मौका दिइनेछ।—प्रेषित २४:१५ पढ्नुहोस्।
न्यायको दिन किन हजार वर्ष लामो हुनेछ?
हजार वर्षको दौडान मरेकाहरूलाई फेरि जीवित गरिनेछ। (प्रकाश २०:४, १२) परमेश्वरबारे सिक्न र उहाँप्रति आज्ञाकारी हुन तिनीहरूलाई समय चाहिन्छ। प्रायः मानिसहरू मर्नुभन्दा अघि गरेको कामको आधारमा न्याय गरिन्छ भन्ने विश्वास गर्छन्‌। तर त्यसको विपरीत मानिसहरूलाई जीवित गरेपछि तिनीहरूले देखाउने प्रतिक्रियाको आधारमा मात्र न्याय गरिनेछ भनेर बाइबलमा बताइएको छ।—रोमी ६:७ पढ्नुहोस्।
हजार वर्षको शासन सुरु हुनअघि अचानक आउने न्यायको दिनबारे पनि बाइबलमा बताइएको छ। त्यस दिनलाई अन्तको दिन भनिन्छ र यस दिनबारे यही पत्रिकाको आवरण लेखमा चर्चा गरिएको छ। अन्तको दिनमा परमेश्वरले दुष्ट मानिसहरूलाई सदाका लागि हटाउनुहुनेछ। (२ पत्रुस ३:७) त्यसैले हामीले परमेश्वरलाई माया गर्छौं भनेर शब्दमा मात्र नभई कामबाट देखाइरहनुपर्छ।—२ पत्रुस ३:९, १३ पढ्नुहोस्।